SAWIRRO: Real Madrid oo iska xaadirisay FINAL ka Club World Cup – Gool FM
Byare December 15, 2016
(Japan) 15 Dis 2016. Real Madrid ayaa u soo gudubtay Final-ka koobka kooxaha adduunka kaddib markii ay 2-0 ku martay kooxda Club America.
Qeybtii hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 1-0.
Inkastoo ay Real Madrid sameysay fursado badan, laakiin goolka waxay heleen dhammaadka qeybtii hore daqiiqadii 45-aad kubbad uu Karim Benzema ku dhaliyay lugta midig kaddib baas dheere cajiib ah uu ka helay saaxiibkii Toni Kroos.
Real Madrid ayaa sidoo kale fursado badan heshay qeybtii labaad ee dheesha balse si la mid ah qeybtii hore garsooraha oo seeriga afka ku haya ayaa waxaa goolka u dhaliyay Cristiano Ronaldo kubbad u muuqatay offside balse la ansixiyay maadaama uu sax ahaa.
Haddaba Los Blancos ayaa axada la ciyaari doonta kooxda reer Japan Kashima Antlers final-ka tartankan.
Man City oo laacib muhiim ah ka raadinaysa Atletico Madrid